Izindaba - Umphumela wegciwane le-covid-19 ku-NBR latex
I-latex ye-NBR ikhombisa izindawo ezinhle kakhulu njengokumelana no-oyela namanye amakhemikhali okuzenza zifiseleke kakhulu ekukhiqizeni izinto zokuzivikela ikakhulukazi amagilavu ​​womkhakha wezimboni nowezempilo. Lokhu kungena okukhulayo kulindeleke ukuthi kudale amathuba amaningi emakethe ye-nitrile butadiene rubber latex esikhathini sonke sokubikezela.
Ukukhula kokungena kwezimboni ezifundeni ezisathuthuka kanye nokuqwashisa okwandayo ngokuphepha kwabasebenzi kuzoba nomthelela omuhle ekukhuleni kwemakethe ngesikhathi sokubuyekeza. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa okwandisiwe kwamagilavu ​​ezimbonini zamakhemikhali, zamaphepha, kanye nezokudla nakho kungenzeka kukhulise isabelo semakethe se-nitrile butadiene yerabax esikhathini sonke sokubikezela.
Igciwane le-COVID-19 elisabalele emhlabeni wonke liholele ekwenyukeni kwemali esetshenziswayo yezokunakekelwa kwempilo okuyothi yona ikhuphule ukufunwa kwamagilavu ​​e-latex e-NBR ngesikhathi sokubikezela. I-COVID-19 iholele ekusetshenzisweni okwandayo kwamagilavu ​​ukuze kuvikelwe umuntu ngakho-ke kulindeleke ukuthi kulethe ukwanda kwezidingo zemakethe ye-latex yerabha ye-nitrile ngonyaka we-2020.
Imfuno ye-NBR latex yezimboni kanye nezimboni zabasebenzisi bokudla kulindeleke ukuthi ihlale iphansi ngesikhathi sokuvala ekuqaleni kuka-2020, kepha imboni yezokunakekelwa kwezempilo kulindeleke ukuthi ikhombise ukufunwa okukhulu ngaso sonke isikhathi ngesikhathi esifanayo.
Ukukhula kwe-Asia Pacific kulindeleke ukuthi kukhule ku-CAGR ephezulu kakhulu ngesikhathi sesimo sezulu. Ukwanda kwamandla okwenziwa ngabakhiqizi abakhulu kanye nokusetshenziswa kwemali okwandayo kwezempilo kungenzeka kuqhube imakethe ye-latex yerabha ye-nitrile butadiene ngesikhathi esinikeziwe sika-2020-2026. IMalaysia, iThailand neChina zibambe iqhaza elikhulu ekukhuleni kwezimakethe. I-Middle East neLatin America kulindeleke ukuthi ikhombise ukukhula okuvilaphayo sonke isikhathi sesimo sezulu. Inani elilinganiselwe labakhiqizi be-latex be-NBR esifundeni kanye nokuncika okuphezulu kokungeniswa kwempahla kubangelwa ukukhula kancane. Ibhizinisi le-latex le-Middle East kulindeleke ukuthi likhule ku-CAGR elingaphezudlwana kuka-3% ngesikhathi sokuhlola. (Ithi yi-Global Market Insights Inc.)